नेपाली महिला क्रिकेट टिमकी तीब्र गतिकी बलर अन्जली चन्दले बनाइन् विश्व कीर्तिमान, माल्दिभ्स १६ रनमै अलआउट ! – Etajakhabar
नेपाली महिला क्रिकेट टिमकी तीब्र गतिकी बलर अन्जली चन्दले बनाइन् विश्व कीर्तिमान, माल्दिभ्स १६ रनमै अलआउट !
पोखरा– नेपालले १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) महिला टि २० क्रिेकेटमा नेपालले माल्दिभ्सविरुद्ध शान्दार जीत दर्ता गराएको छ। नेपालले माल्दिभ्सलाई १६ रन मै अल आउट गरको हो। यसै खेलमा अन्जली चन्दले अविश्वसनिय विश्वकीर्तिमान प्रर्दशन गरेपछि नेपालले १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद(साग) महिला क्रिकेटमा माल्दिभ्सलाई १० विकेटले हराएको छ ।
नेपाली महिला क्रिकेट टिमकी तीब्र गतिकी बलर अन्जली चन्दले टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय महिला क्रिकेटमा विश्व कीर्तिमान बनाएपछि नेपालले छिटो जित निकाल्न सफल भएको हो । १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) अन्तर्गत माल्दिभ्स विरुद्धको खेलम २.१ ओभरमा २ मेडन कुनै रन नदिएर ६ विकेट लिँदै विश्व कीर्तिमान बनाएकी हुन् ।
सामान्य १७ रनको लक्ष्य नेपालले पाँच बलमै पुरा गरेको हो । पहिलो नो बलमा काजल श्रेष्ठले चौका प्रहार गरिन् । पहिलो बलमा चौका प्रहार गरिन् । दोस्रो बलमा १ रन लिदा तेस्रो बलमा सिता राना मगर डट भइन् । चौथोमा वाइड २ र अर्कोमा काजले चौका प्रहार गरिन् । पाँचौ बलमालेग वाइका रुपमा १ रन लिदै नेपालले ५ बलमा खेल जितेको हो । अन्जलीले अद्भुत प्रदर्शनकै कारण माल्दिभ्स १०.१ ओभरमा १६ रनमा अल आउट भएको छ ।
Posted on: Monday, December 2, 2019 Time: 13:57:51
-19893 second ago
-19255 second ago
-18142 second ago
-17313 second ago